Fepetra sy fepetra - Ivontoerana fitsaboana ny homamiadana any California
Ny zotom-bokatra sy ny marika. Ny fitaovana rehetra tafiditra ao amin'ny tranokala, anisan'izany ireo rakitra mifandraika dia namboarin'ny California Protons na avy amin'ny mpamorona an'io fitaovana io. Ireo fitaovana rehetra ireo dia arovan'ny Etazonia sy / na ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona. Ny marika rehetra, marika serivisy ary logo ("Tombo-kintana") tafiditra ao amin'ny tranokala dia fananan'ny tompony. Ity fepetran'ny fampiasana ity dia tsy manome alalana anao hampiasa ny marika rehetra ampiasaina ao amin'ny tranokalanay. Tsy misy na inona na inona tafiditra ao amin'ny tranokala izay azo raisina ho fanomezana fahazoan-dàlana hampiasa Trademark raha tsy nahazoana alalana avy amin'ny tompony. Azonao atao ny tsy mampiasa framing na mampiasa meta-tags na lahatsoratra hafa miafina hampiasa ny mari-pamantarana ao anaty tranokala. Tsy azonao atao ny manaisotra, manakorontana na manova fanamarihana ara-dalàna hita na miaraka amin'ny tranokala.
Rohibe. Azonao atao ny mampiasa, mampifandray, na manisy endrika ny votoaty tafiditra ao amin'ny tranokala amin'ny fomba mety hiteraka korontana raha ny loharano, fiaviany, fifandraisana, fifandraisana, fiaraha-miasa, fanohanan'ny atiny. Azafady, azafady fa ny votoaty tafiditra ao amin'ny tranokala dia mety mifandray amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo izay mety misy fehezan-teny ampiasaina. Azafady zahao amin'ireo tranonkala ireo ny fampahalalana mety. California Protons dia tsy nandinika ireo tranonkala mifandraika ireo ary tsy tompon'andraikitra amin'ny atiny na ny mahitsy azy.
Famaritana manokana momba ny mombamomba ny fitsaboana. Ny fampahalalana ao amin'ny tranokala ihany dia natao ho an'ny antontam-baovao sy ny fanabeazana. Tsy misy amin'ny tranokala na izay mifandraika amin'izany fa tsy torohevitra momba ny fitsaboana na koa tsy tokony hampiasaina amin'ny torohevitra, fitiliana na fitsaboana ankoatry ny fifampidinihana manam-pahaizana momba ny fahasalamana. Ny tranokala dia tsy natao hananganana dokotera-marary na fifandraisana klinika. Raha manana fanontaniana na ahiahy momba ny fahasalamanao ianao dia mifandraisa amin'ny dokotera anao na ny matihanina hafa momba ny fitsaboana. Aza manao tsinontsinona, tsy mitady, na mangataka fitadiavana torohevitra matihanina noho ny tranokala na fampahalalana ao anaty tranonkala. NY TENY ARAKA ARY FAMPIDORANA INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA NO TSY HITANAO ATAO FAMPISEHOANA NY FAMPIDORANA NA FIVORIANA MBOLA MAMPIKA, FIVAVAHANA, NA HAFA FAHASALAMANA INDRINDRA, FIKAMBANANA, FIVORIANA NA FANDROSOANA @ FANAVOTANA.
Famerana ny andraikitra sy fampidirana ny ady. NY WEBSITE dia omena amin'ny fotony "TOA" ary "azo atao", ary ny fampiasanao ny tranokala dia ekena manokana amin'ny volanao manokana. NY PROTONS CALIFORNIA dia TSY MISY FAMPIANARANA, MAZAVA SA TSY MISY, MOMBA NY FAMPIASANA NY WEBSITE NA NY ZAVATRA tafiditra ao amin'ny WEBSITE, ARY MAMARATRA NY FAMARIHANA AZY NA NY FAMARIHANA TANORA, NY FAMPIANARAM-PAHORANA, TSY FANARITRA TSY MISY. NY PROTONS CALIFORNIA dia TSY MISY REPRESENTATION, GARANTIE NA FANANTENANA MOMBA NY FAHASALAMANA, FAHAIZANA, FAHATONDRANA, CURRENTNESS, NA FARITANY NY INFORMATION, LOHATENY, TEXT, GRAPHICS, HYPERLINKS, izay natolotray anay. Ny CALIFORNIA PROTONS koa dia manambara mazava tsara izay mety ho andraikitra amin'ny fahaverezan'ny fahaverezana, na ny viriosy izay mety hisy fiantraikany amin'ny fitaovanao amin'ny solosaina na ny fanananao hafa avy amin'ny ACCESSING-nao na mampiasa ampahany amin'ny WEBSITE.
Ataovy izay azonao navela araka ny lalàna, California prôtôna, dia tsy ho mendrika na inona na inona tsy mivantana, mpitranga, MANOKANA, CONSEQUENTIAL azy, ohatra tsara, OR hanasazy fahasimbana, na ao AN zavatra amin'ny fifanarahana NA tort (anisan'izany ny tsirambina SY henjana madio), hitsangana avy ao OR mifandraika INDRINDRA INDRINDRA ARAKA NY FANAFAHANA, NA HITOMPOANA na FAMPISEHOANA AZA ATAO ARY ATAO MBOLA KOKONY, INDRINDRA INDRINDRA TSY HANATRIKA, HANATRANY DATA, INABILITY TO ACCESS NA MAMPANOTAKA NY FANAVOTANA ARY FAMPIDORANA NA FAMPISEHOANA NA FANAFAHANA, AZA ATAO VONINALIA FIVORIANA AZY DIA FAHADIANA.
Serasera. Izay fifandraisana na fitaovana ampitainao amin'ny fampiasana ny tranokala, anisan'izany ny data, ny fanontaniana, ny fanehoan-kevitra, ny soso-kevitra, na ny toy izany dia, ary azo raisina ho toy ny, tsy tsiambaratelo ary tsy misy vidiny ary tsy hanangana fifandraisana klinika eo aminay na ny antony California Proton mba hamorona na hihazona fampahalalana momba anao. Izay rehetra alefanao na alefanao dia zary fananan'i California Proton ary azo ampiasaina amin'ny tanjona rehetra. Manaiky ianao fa tsy handefa na mandefa any California Proton ianao amin'ny fifandraisana na atiny izay manitsakitsaka na manitsakitsaka ny zon'ny antoko fahatelo. California Protons dia tsy mamaly izay fanontaniana momba ny toe-pahasalamana manokana. Tokony ho fantatrao ny loza mety hateraky ny fiarovana amin'ny fampitana vaovao amin'ny tambajotram-bahoaka, ary tsy azonay antoka fa hohafinafina izany vaovao izany.
Privacy. Ny Politika momba ny fiainana manokan'ny California Protons dia manazava ny fomba hitondranay ny angon-drakinao manokana rehefa mampiasa ny tranonkalanao izahay. Amin'ny fampiasana ny tranonkalantsika, manaiky ianao fa ny California Protons dia afaka mampiasa angon-drakitra toy izany araky ny politikantsika manokana.
Ny lalàna sy ny fifehezana azo ampiharina. Amin'ny alàlan'ny fidirana na fampiasana ny tranokala, manaiky ianao fa ity fepetra fampiasana ity sy ny politikantsika momba ny fiainana manokana ho an'ny tanjona rehetra dia hifehezana sy hoentina mifanaraka amin'ny lalàn'ny Fanjakana ao New York, nefa tsy mifandraika amin'ny fitsipiky ny fifanoherana ny lalàna, ary izay misy hetsika mifototra na milaza ny fanitsakitsahana ireo fepetra ireo dia tsy maintsy atao ao amin'ny fanjakana na federaly iray any amin'ny State of New York. Ankoatr'izay, manaiky ny hanaiky ianao ary manafoana ny zo rehetra hanoherana ny fanapahana manokana sy ny toeram-pitsarana toy izany.